Ny Google Pixel dia tsy mahatohitra rano noho ny tsy fahampian'ny fotoana | Androidsis
Ilay mpanao gazety Kelsey McClellan avy amin'ny tranonkala Wired malaza dia nanambara tamin'ny alàlan'ny podcast fampahalalana tena mahaliana momba ilay vaovao Andalana Pixel an'i Google, miaraka amin'ny Pixel sy Pixel XL.
Ary io dia ny firesahana amin'ireo solontenan'ny Mountain View fotoana fohy taorian'izay ny fanolorana ofisialy ny telefaona, nohazavain'izy ireo taminy fa ny telefaona vaovao an'ny G lehibe tsy tantera-drano izy ireo, na dia eny hatramin'ny famafazana aza, noho ny antony tena tsotra: tsy fahampian'ny fotoana.
Google Pixels dia tsy manana fanoherana rano noho ny tsy fahampian'ny fotoana ahazoana ny fanamarinana IP ilaina
Efa hitantsika tato ho ato izay, na dia manana c aza ireo terminal ireoFanamarinana IP53 izay manome azy ireo fanoherana lehibe amin'ny fiparitahan-tsakafo sy zavatra hafa kely, mpampiasa iray dia nanao fitsapana tamin'ny alàlan'ny fandentehana ny Google Pixel nandritra ny adiny iray ary niaritra tsy nisy olana ny telefaona. Saingy tranga tsy manam-paharoa izany ary tsy mamporisika anao hanao izany satria ho very ny fiantohana anao ary mety ho lasa lanjan'ny taratasy tsara tarehy sy lafo ny findainao.
Ny olana dia izay Google dia efa niasa tamin'ny laharana findainy manokana hatry ny ela, alohan'ny hanesorana ny tetikasa iray manontolo amin'ny faran'ny 2015 ary manomboka indray. Inona no dikan'ity? Na ny Google Pixel na ny Google Pixel XL dia tena nandeha tamin'ny latabatra famolavolana ka hatramin'ny latabatra famokarana tao anatin'ny 9 volana mahery.
Miaraka amin'ny fe-potoana fohy toy izany, ny ekipan'ny Google tompon'andraikitra amin'ireo terminal vaovao ireo dia tsy maintsy nanapaka tany ho any, ary iray amin'izany ny fanoherana ny vovoka sy ny rano. Mitandrema, hoy aho indray fa ireo terminal ireo dia manana fanamarinana IP53 izay manome ny fanoherana ny fiparitahan'ny vovoka sy ny vovoka, saingy tsy ny fanamarinana IP67 na IP68 no mamela ny terminal hisitrika mandritra ny fotoana maharitra tsy misy risika.
Ratsy ambany kokoa mihevitra lamin'ny fandraisana tsara izay ananan'ny tsipika vaovao an'ny G lehibe Anisan'ireo gazety izay efa nanome satroboninahitra ny Google Pixel sy Pixel XL ho faran'ny terminal tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Google Pixel dia tsy tantera-drano noho ny tsy fahampian'ny fotoana
Raha ny filazan'ny WSJ, ny fanadihadiana momba ny fipoahana ny Note 7 dia mampihemotra ny fampandrosoana ny Galaxy S8